Mareykanka oo ka codsadey Ereteriya iney si degdeg ah uga saarto Gobalka Tigreyga – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo ka codsadey Ereteriya iney si degdeg ah uga saarto Gobalka...
Mareykanka oo ka codsadey Ereteriya iney si degdeg ah uga saarto Gobalka Tigreyga
war qoraal ah oo ay faafisey safaarada mareykanka ee dalka ereteriya ayaa lagu sheegey ina dawlada ereteriya si degdeg ah uga soo saarto ciidamadeeda gobalka tigreyga ee itoobiya. warbixinta ayaana u qorneyd sida tan.
safaaradda Mareykanka ee Asmara, Eritrea:
“Mareykanku wuxuu ka codsaday dowladda Ereteriya inay ciidamadeeda si deg deg ah uga saarto gobalka Tigray.
Waxaan ku qanciney iney walaac daran keeni karaan warbixinada lagu kalsoonaan karo ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ee ay geysteen ciidamada Ereteriya iyo maleeshiyaadka kale ee Tigrayga.
Waxaan sii wadeynaa baaqyada baaritaanada madax banaan oo hufan oo ku saabsan warbixinada bililiqada, rabshadaha, kufsi, weerarada ka dhaca xeryaha qaxootiga, iyo xadgudubyada kale ee xuquuqda aadanaha, iyo la xisaabtanka kuwa mas’uulka ka ah dhibaatada loo geysanaayo shacabka
Previous articleWAA HABAAR QABE LAGU SIRMAY‼️xildh. Mahad salaad
Next articleOrange iyo Vodafone ayaa xaqiijinaya qorshayaasha lagu dalbanayo rukhsadaha Isgaadhsiinta Itoobiya